Bigot Buddhist Monks’ attempt to do religious cleansing on Christians in Myanmar | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« THE JEWISH CHRONICLE ONLINE:Buddhist atrocities on Muslims in Myanmar
The death of the monk who entered the mosque to burn and trapped accidentally was used to justify the killing of 400 Muslims in Meikhtila »
Bigot Buddhist Monks’ attempt to do religious cleansing on Christians in Myanmar
Source: FB of Duwa Kachin April 10-2013
ခရစ်ယာန်ဘာသာပိုပြီး ပြည့်စုံတယ်လို့ ပြောချင်တာ မဟုတ်။ လက်တွေ့ဘ၀မှာ ခရစ်ယာန်သာသနာဟာ ကျနော်တို့ကို ဒုက္ခမပေးခဲ့ဘူး။ မဒိမ်းမကျင့်ခဲ့ဘူး။ ရွာမီးမရှို့ခဲ့ဘူး။ သူတို့ဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ တရားနဲ့ ၀င်လာတယ်။ ပညာသင်ပေးတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးရုံတွေ ဖွင့်ပေးတယ်။ ခရစ်ယာန် သာသနာပြုဆရာတွေဟာ ကချင်စကားတောင် မပြောတတ်ခဲ့ဘူး။ သူတို့ရဲ့ ဘုရားအကြောင်း ကချင်တွေ နားလည်အောင် စကားနဲ့ မပြောဘူး။ လက်တွေ့ အလုပ်နဲ့ ပြတယ်။ ကချင်တွေဟာ ကျမ်းစာဖတ်တတ်လို့ ဘုရားသိလာတာ မဟုတ်၊ အဲဒီ ဘုရားကို ကိုးကွယ်တဲ့ လူတွေရဲ့ အပြုအမူကို သိမြင်လာလို့ ခရစ်ယာန် ဖြစ်လာတာပါ။ ကချင်တွေကို သာသနာပြုတာ အမေရိကန်တွေပါ၊ အင်္ဂလိပ် အစိုးရ မဟုတ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီ ခေတ် ချုပ်ငြိမ်းသွားအောင် တွန်းအားပေးခဲ့တာလဲ အမေရိကန် အစိုးရ ပါပဲ။ သခင် အောင်ဆန်း နဲ့ ဗမာ ကျောင်းသားတွေကို တော်လှန်ရေး စိတ်ဓါတ် နဲ့ နိုင်ငံရေး အတွေးအမြင် ပေးခဲ့တာလဲ အမေရိကန် ပညာရေး ပါ။ ဒီနေ့ထိ ကမ္ဘာမှာ ထိပ်ဆုံးကို ရောက်လာအောင် သူတို့ နိုင်ငံကို တည်ထောင်လာခဲ့တဲ့ ဘိုးဘွားတွေဟာ ရိုဒေါ့ကျွန်းမှာ ပထမဆုံး တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ခရစ်ယာန် အသင်းတော် တခုရဲ့ အခြေခံ ဥပဒေ ကို အခြေပြုပြီး အမေရိကန် အစိုးရ ရဲ့ အခြေခံ ဥပဒေ ကို ရေးဆွဲ ခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့ထိ အမေရိကန် ဒေါ်လာမှာ “In God We Trust” ဆိုတာ ရှိနေတုန်းပါ။ ဒါဟာ အသက်ရှင်တဲ့ ဘုရားတဆူ ဟာ သူတို့အထဲမှာ တကယ် အလုပ်လုပ်နေတယ် ဆိုတာ ကချင်တွေ သိနေလို့ ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကို မစွန့်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ချင်း၊ ကရင် နဲ့ ကချင်တွေကို သတ်လိုက်လို့ ခရစ်ယာန်ဘာသာတရား ပျောက်သွားမှာလဲ မဟုတ် ပါဘူး။ ဒီတော့ ဘာဖြစ်လို့ အချိန်ကုန်ခံမလဲ။ ငွေကုန်ခံမလဲ။
Tags: 969, Anti-Christian activities, Buddhism, Buddhist Monks, Burma, Ethnic cleansing, In God We Trust, Islamophobia, Malaysia, Muslim, Religion and Spirituality, religious Cleansing, United States, Wira Thu
This entry was posted on April 23, 2013 at 6:24 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.